विद्युतीय सवारीमा बढ्दो क्रेजः दुई महिनामै ४८ करोड बढीको भित्रियो, कुन देशबाट कति ? - Arthatantra.com
विद्युतीय सवारीमा बढ्दो क्रेजः दुई महिनामै ४८ करोड बढीको भित्रियो, कुन देशबाट कति ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा नेपालमा ४८ करोड २ लाख ८६ हजार रुपैयाँको विद्युतीय गाडी नेपालमा आयात भएको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार भदौ मसान्तसम्ममा ४ वटा देशबाट ५५४ थान गाडी नेपालमा भित्रिएको छ ।
४८ करोड २ लाख ८६ हजार रुपैयाँको गाडी भित्र्दा राज्यले १२ करोड ९६ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व पाएको छ ।
विभागका अनुसार भदौ सम्ममा नेपालामा भारत, चीन, दक्षिण कोरिया र जापानबाट विद्युतीय गाडी आयात भएको छ । चीनबाट तीन पाङ्ग्रे सवारी ७२ लाख ५२ हजार रुपैयाँको ५४ वटा आयात भएको छ । यसबाट राज्यले १७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ राजस्व पाएको छ ।
यस्तै भारतबाट तीन पाङ्ग्रे सवारी २० लाख ३४ हजार रुपैयाँको २० वटा आयात भएको छ । यसबाट राज्यले ४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ राजस्व पाएको छ ।
चीन र भारतबाट ल्याइएका यी सवारी साधान नेपालमा ल्याएर जडान गरिएको हो । यी साधान जडान नगरी ल्याईएको हो ।
विभागका अनुसार जडान गरेर चीनबाट २ करोड १३ लाख ५५ हजारको २१९ वटा तीन पाङग्रे सवारी साधान नेपालमा आयात भएको छ । यसबाट राज्यले ५१ लाख ९० हजार रुपैयाँ राजस्व पाएको छ ।
भारतबाट पनि ११८ वटा तीन पाङग्रे विद्युतीय सवारी आयात भएको छ । ९३ लाख ९३ हजारको उक्त साधान आयात गर्दा नेपालले २२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
विभागका अनुसार चीनबाट १०० किलोवाटसम्मका कार, जीप भ्यान ७ वटा आयात भएका छन् । जसको मूल्य १ करोड २ लाख ८२ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
जसबाट राज्यले २४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ कर लिएको छ । सोही प्रकारका गाडी भारतबाट ७ करोड २६ लाख १४ हजारमा ३० वटा आयात भएका छन् ।
जसबाट राज्यले १ करोड ७२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ राजस्व लिएको छ । यस्तै सोही प्रकारका गाडी कोरियाबाट ३४ वटा आयात भएका छन् । जसको मूल्य १२ करोड ६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यसबाट राज्यले २ करोड ९३ लाख २० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
भदौ मसान्तसम्म नेपालमा १५० किलोवाट देखी २०० किलोवाटसम्मका ५१ वटा विद्युतीय कार, जीपन, भ्यान चीनबाट आयात भएको छ ।
त्यस्तै जापनबाट ११ र दक्षिण कोरियाबाट १० वटा आयात भएको छ । उक्त गाडीको मूल्य क्रमशः १५ करोड १२ लाख ६८ हजार, ४ करोड २६ लाख ५१ हजार र ४ करोड २७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
तीन देशबाट उक्त क्षमताका गाडी आयातगर्दा राज्यले क्रमशः ४ करोड ५३ लाख ५ हजार १ करोड २७ लाख ७४ हजार र १ करोड २८ लाख १३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी गाडी चीनबाट मात्रै ३२७ वटा आयात भएको छ ।
वि.सं.२०७८ असोज १२ मंगलवार १३:१४ मा प्रकाशित
अघिल्लाे सीबीआईएल क्यापिटलको साधारणसभा कात्तिक ५ गते, लाभांश वितरण गर्ने
पछिल्लाे २० लाख ८२ हजार कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्दै रिजलाईन ईनर्जी, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल